ဖိုးလပြည့် (ခေါ်) နေရွှေသွေးအောင် ရဲ့ ရှင်းချက်အပြည့်အစုံ... - TAWTHU
Myanmar Idol Season-3(Top-10) Performance Show Live Streaming....
ထိုင်းဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် ခိုလှုံနေရတဲ့ မြန်မာအလုပ်မားတွေ
ချစ်သူသက်တမ်း ၄ နှစ်ကျော်မှာ စေ့စပ်လိုက်​တဲ့ ဒါရိုက်​တာ ဏကြီးနဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု
ဒီနေ့ ည Myanmar Idol Season3မှာ ဘယ်သူတွေက ဘာသီချင်းနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ကြမှာလဲ..
သိပြီးပြီလား..? မန်းလေးသူ ညီမလေးတယောက်ရဲ့ ရင်နင့်ဖွယ် ရင်ဖွင့်သံ
လုပ်ရပ်က ရက်စက်လွန်းတဲ့ လူ.. လောကကြီးထဲမှာ ဘယ်တော့မှ မရှိသင့်တဲ့ လူစိတ်မရှိတဲ့..လူ
မိုးတွင်း ခြင်ပေါလွန်းလို့ စိတ်ညစ်နေသူများအတွက် ထူးဆန်းတဲ့ ခြင်မကိုတဲ့ နည်းတွေ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်
လူတွေရဲ့ လောဘစိတ်ကို အသုံးချပြီး အလိမ်ခံလိုက်ရတဲ့ ဖြစ်ရပ်
January 4, 2018 January 4, 2018 Taw Thu
ဖိုးလပြည့် (ခေါ်) နေရွှေသွေးအောင် ရဲ့ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သမျှ ကောလဟလများကို တစ်ချိန်က ရှင်းလင်းထားတဲ့ ရှင်းချက်အပြည့်အစုံ။
ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ဗျ… အတိုက်အခိုက်ခံလာရတဲ့အခါ အရင်တုန်းကလိုဘာမှမပြောဘဲနေမလား၊ အမှန်အတိုင်းရှင်းပြမလားဆိုတာ…
ကျွန်တော်ပထမဆုံးအကြိမ် Public ကိုစာရေးရှင်းပြခဲ့တာက တက္ကသိုလ်ဘောလုံးပွဲလုပ်တုန်းကပါ။ တစ်ခုသွားတွေ့ရတာ မြန်မာလူမျိုးတော်တော်များများက ကောလာဟလကိုယုံလွယ်တယ်ဆိုတာနဲ့ ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရှင်းပြတော့လည်း လက်ခံတတ်ကြတယ်ဆိုတာပါပဲ…
အခုလည်းမမှန်သတင်းရေးပြီး ပွဲဆွတတ်တဲ့ Exile တစ်ယောက်ကသူ့ဂျာနယ်မှာ ပေါက်ကရရေးထားတာတွေ့ပါတယ်။ သိုသိုသိပ်သိပ်ပင်နေလိုသော်လည်း အရင်ကလိုအမြင်ကပ်ပုဒ်မနဲ့ စော်ကားတိုင်းခံရမယ့် ခေတ်မဟုတ်တော့လို့ လူထုကြားပြန့်နေတယ်လို့ယူဆရတဲ့ ကောလာဟလသတင်းမှားများကို အမှန်အတိုင်းပြန်လည်တင်ပြအပ်ပါတယ်။
– မည်သည့်နိုင်ငံ၏တက္ကသိုလ်ကိုမှ လေ့လာရေးအဖြစ် အလည်အပတ်ပင်မရောက်ရှိဘူးပါ။ ဘယ်လိုစပြီး သတင်းထွက်လာမှန်းကိုပင်မသိပါ။ စင်္ကာပူနိုင်ငံရှိမည်သည့် တက္ကသိုလ်/ကျောင်းများတွင်မဆိုလည်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်။ လေယာဉ်/ရဟတ်ယာဉ်ဖြင့် နေ့ချင်းပြန်သွားတက်ဖို့ဆိုတာကတော့ ပို၍ပင်ဝေးသောကိစ္စဖြစ်ပါသည်။
– ဝတ်မှုန်ရွှေရည်နှင့်ခိုးပြေးသည်၊ Suzuki ကားပေးသည်ဆိုသည်မှာမဟုတ်ကြောင်း အစထဲကရှင်းပြဖူးပါသည်။ ပေးလည်းမပေးနိုင်သလို ပေးလည်းယူမည့်သူမဟုတ်ပါ။ ၂၀၀၉ ခုနှစ်သူ့မွေးနေ့ပွဲသွားတက်ပြီး နောက်ရက်မှာပင် အဲ့လိုပြောလာခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သူ့ကိုပေးခဲ့သည့် လက်ဆောင်က Ralph Lauren lotion နှင့်ရေမွှေးဘူးဖြစ်ပါသည်။ မိုးယုစံနှင့်လည်း လက်ထပ်သည်ဟု Freedom news group ကသတင်းမှားဖြန့်ဘူးပါသည်။ အဲ့ facebook page ကဗုဒ္ဓဘာသာပတ်သက်လာလျှင်တောင် မအေနှမကိုင်တုတ်တတ်ကြောင်းကြားဘူးပါသည်။
– မိုးစက်ဝိုင်တစ်ယောက်လည်း သူ့စရိတ်နဲ့သူဘောလုံးပွဲ လာတက်ပေးတာတောင် တော်တော်အကြိတ်ခံလိုက်ရရှာပါသည်။ ပြိုင်ကားမှာကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းကားဖြစ်ပြီး ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းကကားမောင်း၊ ကျွန်တော်ကမိုးစက်ဝိုင်ဖလားယူလာသည်ကို စင်ပေါ်မှစောင့်ကာလက်ခံပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ (ကားတံခါးဖွင့်ပေးနေသည့်သူမှာ Restaurant မှငှားထားသော Waiter တစ်ဦးသာဖြစ်ပါသည်)
– နောင်ကောလာဟလထွက်လာလျှင် လူထုနှင့်ထိတွေ့မှုရှိသည့် သက်ဆိုင်ရာအနုပညာရှင်များကို တိုက်ရိုက်မေးလျှင်ပိုကောင်းမည်ဟုထင်ပါသည်။
– လုံးဝမမောင်းဘူး/မသင်ဘူးပါ။ ဝါသနာလည်းမပါပါ။ ရဟတ်ယာဉ်နဲ့ ဘဲကင်ဝယ်ပေးရသည်ဟုရေးတာကတော့ ဘာပြောရမှန်းတောင်မသိတော့ပါ။ မှတ်မှတ်ရရ ရဟတ်ယာဉ်ကိစ္စ မဇ္ဈိမကရေးသားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်မဇ္ဈိမသည် အတိုက်အခံလုပ်ခဲ့သော မီဒီယာများအနက် နောက်ပိုင်းတွင်သိက္ခာရှိရှိ ရေးသားရပ်တည်မှုပြုလာသည်ဟု မြင်ပါသည်။
၄။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်အောင်မြင့်ဦး၏သား ကော်ဖီဆိုင်ကိုဘူဒိုဇာဖြင့်ထိုးသည်ဟူသောကိစ္စ
– မှတ်မိသလောက်ငါးထောင်တန်ကော်ဖီကို မှာမရဟုဆိုသဖြင့် ကျွန်တော်ကဘူဒိုဇာဖြင့်ထိုးချခိုင်းသည်ဟု ရေးထားပါသည်။ လုံးဝမဟုတ်သလို ထိုကဲ့သို့လည်းဘယ်သူမှလုပ်၍ရမည်မဟုတ်ပါ။ သူ့ဟာသူညိစွန်းသဖြင့် ဖျက်ခိုင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟုသိရပါသည်။ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနနှင့် ကာယကံရှင်များကိုသာမေးကြပါဟု တိုက်တွန်းပါသည်။
– Chelsea ပရိတ်သတ်ဖြစ်ပါသည်။ Joe Cole, Robben, Drogba, Ballack, Lampard, Essien, Terry, Carvalho, Cech တို့ခေတ်ကိုအကြိုက်ဆုံးဖြစ်ပါသည်။ မန်ယူမှလွဲ၍လည်းအကုန်အားပေးပါသည်။ ကျွန်တော့်လိုနာမည်ကြီးထမင်းငတ်ကောင်မပြောနှင့် မြန်မာပြည်ရှိဘယ်သူဌေးမှ မန်ယူမဝယ်နိုင်ပါ။ ဘယ်သူဌေးကမှလည်း ဒီလောက်နိုင်ငံတကာက မျက်စိဒေါက်ထောက်ကြည့်၊ပိတ်ဆို့နေချိ်န်တွင် ဘယ် Club ကိုမှဝယ်ဖို့မကြိုးစားခဲ့ပါ။
၆။ The whole burma first
– Top 10 List တွင်ပင်မပါပါ။ ‘သားကိုပေးပါ’ လို့အတင်းသွားပြောရင်တော့ ပေးကောင်းပေးနိုင်ပါသည်။ စာဖတ်သူကော ရာထူးရှိတိုင်း အဲ့လိုကြီးမျက်နှာပြောင်တိုက်သွားပြောချင်မည်လား?? လူထဲကလူသာဖြစ်သော ကျွန်တော်သည်လည်းမတောင်းခဲ့ပါ။ ၂၀၀၆-၂၀၀၇ ပညာသင်နှစ်က TTC ကတစ်နိုင်ငံလုံးအဆင့်(၆)သာ ချိတ်ပါသည်။ ကျွန်တော့်အကြောင်းသိချင်လျှင် ကျွန်တော့်ကိုပညာသင်ပေးခဲ့သော ဆရာ၊ဆရာမများကိုမေးနိုင်ပါသည်။
၇။ ယာဉ်ထိန်းရဲကို ထိုးကြိတ်သည်ဟူသောကိစ္စ
– လုံးဝမဟုတ်ပါ။ သိလိုက်ရသည်က လုပ်စားနိုင်ငံရေးသမားများက နှစ်ဘက်စလုံးမှာရှိတယ်ဆိုတာပဲဖြစ်ပါသည်။
မီဒီယာအချို့နှင့်ပူးပေါင်းအကွက်ဆင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းလည်းပြောခဲ့ဘူးပါသည်။ သတင်းထွက်ထွက်ချင်းကတော့ အစိုးရတစ်ဖွဲ့လုံးကို စာပို့ရှင်းပြခဲ့ဘူးပါသည်။ သူပြောသလိုမီးစိမ်းခိုင်းတာ မီးဝါသွား၍ဆင်းထိုးသည်ဆိုမှာလည်းမဟုတ်ပါ။ ဘယ်သူမှလည်း အဲ့လိုလုပ်လို့ရမည်မထင်ပါ။ အခုခေတ်ကပွင့်လင်းမြင်သာစွာ တရားစွဲဆိုနေကြသောခေတ်ဖြစ်ပါသည်။ သူသာအမှန်ဆိုပါလျှင် အခုနာမည်ကြီးနေသော ဘာအဖွဲ့အစည်း၊ ညာအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ပူးပေါင်း တရားစွဲပါဟုသာပြောလိုပါသည်။
– နိုင်ဝင်း(ခ)မိုးဟိန်းသည် ABSDF အဖွဲ့ဝင်ဟောင်းဖြစ်ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံမှတဆင့် အမေရိကားသို့နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်ဖြင့် သွားရောက်နေထိုင်ခဲ့သူဖြစ်ကြောင်း သိရပါသည်။ မြန်မာပြည်သို့ ပြန်ဝင်ခွင့်ရချိန်တွင် ‘ဒေါ်စု၊NLD နှင့် ၈၈ အကြောင်းအကုန်သိထားပြီးဖြစ်၍ အတွင်းစည်းမှတိုက်ခိုက်မည်’ ဟုအကြောင်းပြကာ ဝန်ကြီးတစ်ဦးထံဂျာနယ်ထုတ်ရန် သွားရောက်အကူအညီတောင်းခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။ သူ့အပြောကိုယုံကြည်ကာ ဝန်ကြီးသားအနေဖြင့်လည်း နိုင်ဝင်း(ခ)မိုးဟိန်းမိသားစုကို နေစရာအစ၊ ဗီဇာကိစ္စအလယ်၊ သူ့ကလေးကျောင်းတက်ရန်အဆုံး ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါသည်။ ဒါကြောင့်လည်း နိုင်ဝင်း(ခ)မိုးဟိန်းက ရှိသမျှလူအကုန်လိုက်ဖဲ့နေသော်လည်း ထိုဝန်ကြီးနှင့်သူ့ကိုကူညီခဲ့သည့် ဘဏ်သူဌေးကြီးတစ်ယောက်အကြောင်း မရေးရဲခြင်းဖြစ်ပါသည်။
– ကျွန်တော်တို့ကို ချိုးချိုးဖဲ့ဖဲ့ရေးလာသောအခါ ကျွန်တော်ကဝန်ကြီးသားကို ထိုကဲ့သို့မရေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံခဲ့ပါသည်။ ဝန်ကြီးသားက မိုးဟိန်းကိုထိန်းမရဖြစ်နေကြောင်း၊ သူ့ကိုထိတာနဲ့ ၈၈ အကူအညီယူ၍ပွဲကြမ်းမည်ဟုပင် ခြိမ်းခြောက်လာကြောင်း၊ ဖြစ်ခဲ့သည့်ကိစ္စများအတွက် အလွန်အားနာကြောင်းပြောကာ သူ့ကိုပြောမရသည့်အဆုံး ဂျာနယ်ဆက်ထုတ်ခြင်းမပြုနိုင်ရန် (ဝန်ကြီးသားကသူ့ပိုက်ဆံဖြင့်ပင်ဝယ်ထားသည့်) ကွန်ပြူတာများကိုသွားရောက် သိမ်းဆည်းခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။
– ကျွန်တော်ဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ခြင်း မဟုတ်သော်လည်း ကျွန်တော်ကြောင့် သူဂျာနယ်ဆက်ထုတ်ဖို့အကြီးအကျယ်အခက်တွေ့သွားသလို ယခုလည်းပြည်နှင်ဒဏ်အပေးခံထားရ၍ စိတ်နာနေမှာဖြစ်ပြီး နည်းမျိုးစုံဖြင့်လည်း ကျွန်တော်တို့ကိုနာမည်ဖျက်ရန် ဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေမှာသာဖြစ်ပါသည်။
– ဆေးလိပ်နံ့ပင်မခံနိုင်ပါခင်ဗျား… အရက်လည်းမသောက်တတ်ပါ။ ဒါကိုသိသောကျွန်တော့်မိတ်ဆွေများကလည်း ကျွန်တော့်ကောင်းကြောင်းလေးလည်းပြောပေးကြပါ။ အခုမှပြောပေးလျှင်လည်း ‘ဖားသည်’ဟုတော့မပြောတန်ရာပါ။
– ဦးမောင်ဝိတ်နှင့်ပေါင်း၍ ဆေးချသည်ဆိုမှာဝေလာဝေးပါ။ သိသူများလည်းမေးကြည့်ကြပါ။ ကျွန်တော့်သင်္ကြန်မဏ္ဍပ်လာလည်သည်ကို အကြောင်းပြုကာလဟလထွက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
– ဝါသနာပါပါသည်။ လေယာဉ်ကွင်းနားရှိ ပြေးလမ်းမဟုတ်သောမြေကွက်လပ်၌လည်း မောင်းဖူးပါသည်။ ဟိုလိုမျိုးဒေါ်လာသန်းချီ ကားပြိုင်သည်ဆိုတာတော့ လျှောက်ပြောတာပါ။ ယခုလည်း ကျွန်တော့်တွင်ဘာပြိုင်ကားမှမရှိပါ၊ ပြိုင်ကားနှင့်စောင့်ကြွားစောင့်ကြွားနေရသည်ကိုပင် လုံးဝမနှစ်သက်ပါ။ ပြိုင်ကားလည်းမစီးပါ။ ကျွန်တော်ပြိုင်ကားနှင့်ရမ်းသည်ကိုတွေ့က တစ်ခါတည်းဓာတ်ပုံရိုက် Internet ပေါ်တင်ပါ။
၁၁။ ဆီးဂိမ်းတွင်ကတ်ပြားမပါဘဲ ဝင်သည်ဟူသောကိစ္စ
– ကြောက်ပါပြီခင်ဗျား…နောက်ဆိုကတ်ပြားကို အချိန်ပြည့်ဆွဲထားပါ့မည်
– ဦးတေဇက ‘မိမိသည် နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲ သားမက်မဟုတ်ကြောင်း’ ၂၀၀၆ခုနှစ်ခန့်ကပြောခဲ့ဘူးပါသည်။
– မိမိ၊စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်နှင့် ဦးဇော်ဇော်ပုံ မှာ ၂၀၀၇ခုနှစ် ဆီဒိုးနားဟိုတယ်မွေးနေ့ပွဲကပုံဖြစ်ပါသည်။ ကုန်ကျစရိတ်မှာလည်း ပုံမှန်ဖြစ်ပါသည်။အနီရောင်တိုက်ပုံမှာ အနီရောင်ကိုကြိုက်၍ဝတ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ယတြာချေခြင်းမဟုတ်ပါ။
– တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်များသည်လည်းပဲ တချို့ရေးသားစွပ်စွဲနေသလို ဗေဒင်၊ယတြာများကို အယုံအကြည်အစွဲအလန်းမရှိလှပါ။
– သမ္မတအရွေးခံမည်ဟုလည်း သတင်းထွက်ဘူးပါသည်။ Freedom news ကပဲဖြစ်ပါသည်။ လုံးဝမဟုတ်ပါ။ အသက်လည်းမမီပါ၊ စိတ်လည်းမဝင်စားပါ။ သိရသလောက်လက်ရှိလူများပင် ဆင်းပြေးချင်နေကြပါသည်။
– ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းတွင် မည်သည့်တပ်မြေ၊ ဝန်ကြီးဌာနပိုင်မြေမှမပိုင်ပါ။ တကယ်ရှိသည်ဆိုလျှင်လည်း လာမေးမနေပါနှင့်။ တစ်ခါတည်းကျူးကျော်တဲများထိုး၍ အလကားသာယူသွားပါ။
– တခြားဘာမှန်းမသိသော ကိစ္စများလည်းရှိပါလိမ့်မည်။အဓိပ္ပါယ်မရှိသောကိစ္စများသာဖြစ်၍ မရေးတော့ပါ။
၁၃။ ဖြည့်စွက်တင်ပြချက် (၅-၁၂-၂၀၁၅)
– ယခင်တပ်မတော်အကြီးအကဲဟောင်းနှင့်ပတ်သတ်၍ မင်္ဂလာဆောင်ကိစ္စ၊ ငါးလောင်းပြိုင်လူသတ်မှုအပါအဝင် နောက်ဆုံးကျောက်စိမ်းကိစ္စများပါစွပ်စွဲထားသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ မင်္ဂလာဆောင်ကိစ္စတွင် အသုံးပြုသောလက်ဝတ်ရတနာများအားလုံး ငှားရမ်းအသုံးပြုထားခြင်းဖြစ်ပြီး ယခုခေတ်တွင်ဇေယျာသီရိဗိမာန်၌ အစိုးရအကြီးအကဲမိသားစုဝင်များကိုမင်္ဂလာဆောင်ခွင့်ပေးထားပြီဖြစ်သကဲ့သို့ ထို့ထက်ကြီးကျယ်ခမ်းနားသောပွဲများပင် နေရာအနှံ့အပြား၌ကျင်းပနေပြီဖြစ်ပါသည်။
ငါးလောင်းပြိုင်လူသတ်မှုကျူးလွန်သူများသည် ယခုအခါပြည်ပသို့တိမ်းရှောင်နေသည်ဟုသိရပြီး ကျောက်စိမ်းလုပ်ငန်းများဖြင့်ငွေအမြောက်အများများရရှိနေသည်ဆိုမှာလည်း လုံးဝမှားယွင်းသောဖော်ပြချက်သာဖြစ်ပါသည်။ များမကြာမီအစိုးရသစ်တက်လာချိန်တွင် ထိုစွပ်စွဲချက်များကိုပြန်လည်စစ်ဆေးစေလိုပြီး ပြစ်မှုတွေ့ရှိပါကအရေးယူ၍ မှားယွင်းသောစွပ်စွဲမှုဆိုပါကအမှန်အတိုင်းပြန်လည်ထုတ်ပြန်ပေးစေလိုပါသည်။
အခုလိုရှင်းပြတာကလည်း စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်လို့မဟုတ်ဘဲ အမှန်အတိုင်းသိစေလို၍သာဖြစ်ပါသည်။ တိုက်ခိုက်လာမှုရှိ၍လည်း အမှန်အတိုင်းရှင်းပြခွင့်ရရှိခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ကောလဟလများကို ဂရုစိုက်ရန်မလိုဟုဆိုသော်လည်း အရင်တပ်ခေါင်းဆောင်များကို နာမည်ဖျက်ချင်တိုင်း ကျွန်တော်တို့က တစ်ခါမှမကျူးလွန်ခဲ့သော ပြစ်မှုများဖြင့်အမြဲတစေ အပုတ်ချခံရမည်ဆိုသည်မှာတော့ အဓိပ္ပါယ်မရှိပါ။ မြန်မာပြည်တွင် ဒီမိုကရေစီအမည်ခံကာ မီဒီယာကိုလက်နက်သဖွယ် ဆိုးဆိုးရွားရွားအသုံးပြုတိုက်ခိုက်နေကြသည်ကို လောက်ကိုင်ကိစ္စတွင်မှ ပြည်သူလူထုက အထိုက်အလျောက် သဘောပေါက်နားလည်လာခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်သည် အရှေ့တောင်အာရှအချမ်းသာဆုံးတိုင်းပြည်မှ ကမ္ဘာ့အဆင်းရဲဆုံးနိုင်ငံအဖြစ်စာရင်းဝင်သွားခဲ့ဘူးပါသည်။ တပ်မတော်အစိုးရလက်ထက်တွင်လည်း စစ်ဝင်မတိုက်ရုံတမယ် အပြင်းအထန်ဖိအားပေး၊ပိတ်ဆို့မှုများနှင့် ထပ်မံကြုံတွေ့ခဲ့ရပြန်သည်။ အခုလည်း နိုင်ငံတကာကဝင်ဆန့်လက်ခံမည်ရှိသေး ပြည်တွင်းစစ်၊ ဆန္ဒပြဆူပူမှုများ၊ ပေါ်လစီမတည်ငြိမ်မှု၊ အချင်းချင်းမညီညွတ်မှုအပြင် “ကိုယ့်ခွင်ထဲဝင်လာပါကတွယ်လိုက်မည်”ဟူသော အယူအဆ၊အတွေးအခေါ်များကို ဆက်လက်ဖက်တွယ်ထားသူများရှိနေသမျှ တိုင်းပြည်ကဘယ်လိုမှတိုးတက်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
သို့ဖြစ်ပါ၍ အမိနိုင်ငံတော်ကြီးကမ္ဘာ့အလယ်တွင် တဖန်ဝင့်ကြွားစွာရပ်တည်နိုင်ဖို့အရေး ကျွန်တော့်တို့အားလုံးက မေတ္တာရှေ့ထား၊ သံသယစိတ်များဘေးဖယ်ကာ၊ တိုင်းရင်းသားမောင်နှမအချင်းချင်း လက်တွဲညီညီပူးပေါင်း၍ သူများနိုင်ငံများထက်နှစ်ဆကြိုးစားမှပင် တော်ကာကျမည်ဖြစ်ကြောင်း အစီရင်ခံတင်ပြရင်း ကျွန်တော်၏စာကိုလည်း ဤနေရာတွင်အဆုံးသတ်၊နိဂုံးချုပ်အပ်ပါသည်။
Source – Nay Shwe Thway Aung – FB ( 18 February 2015 )
နှစ်ကူး ဓမ္မသဘင်ပွဲအပြီး သဒ္ဒါပေါက်လို့ နားကွင်းချွတ်လှူတဲ့ ညီမလေး…
Miss All Nation 2017 တွင်ပထမအဆင့်အလှမယ် Miaoya Title ဆုကို နန်းမွေခမ်း ဆွတ်ခူးရရှိ
June 17, 2018 Taw Thu 0
သူ့မှာ ၀န်ထမ်း (၂၀၀၀) ကျော်ရှိတယ်။ အားလုံးကသူ့ကို “အဖေ” လို့ ခေါ်ကြတယ်။ သူကလည်း “သား” ၊“သမီး” လို့ပဲ ခေါ်တယ်။
သူ့မှာ ၀န်ထမ်း (၂၀၀၀) ကျော်ရှိတယ်။ အားလုံးကသူ့ကို “အဖေ” လို့ ခေါ်ကြတယ်။ သူကလည်း...
မ်ိန်းကလေးတွေ သတိထားမိစေချင်တယ် အရွေးမမှားကြပါစေနဲ့…
သူသာတကယ်ချစ်ရင် ညအချိန်မတော် ၁၂ နာရီ ၁ နာရီ အသည်းအသန်ချိန်းတွေ့ဖို့တောင်းဆိုမှာ မဟုတ်ဘူး ။...
ရင်ထဲမှာ ဘယ်လိုကြီးမှန်းမသိဘူးဗျာ.. သူငယ်ချင်းတွေ ခဏလောက် အချိန်ပေးပြီး ဖတ်ကြည့်ပါလား…
1980 မှ 1995 ခုနှစ်ကြားထဲမှာမွေးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေများရှိရင် ခဏလောက် အချိန်ပေးပြီး ဖတ်ကြည့်ပါလား… တိုက်ဆိုင်မှု...
“ဘယ်လောက်ထိအောင်ဆီးချိုတက်နေလဲ” ကြိုက်သလောက်တက် ဒီဆေးနည်းသိရင် ကြောက်စရာမလို
ရိုးရိုးလေးနဲ့ အရမ်းချစ်စရာကောင်းလို့ မြေပဲပြုတ်ရောင်းရင်း နာမည်ကြီးသွားသူလေး
အဆိုတော် အစ္စဏီရဲ့ မတရား နှိပ်စက် သားမယားပြုခြင်းကို အစအဆုံး ပြောပြနေတဲ့ မော်ဒယ်လေး (ဗွီဒီယိုဖိုင်)
လက်ထပ်တာ ၁ နှစ်လောက်ပဲရှိသေးတဲ့ ဆင်းရဲတဲ့ လင်မယားနှစ်ယောက်